Macluumaadka Shirkadda - Haus Lighting Limited
Haus Lighting Limited waxaa la aasaasay 2013
Haus Lighting Limited waa soosaar firfircoon oo soo saare laydh ah, kaas oo keena xalka ugu fiican ee laydhka ee dhismooyinka ganacsiga iyo kuwa la deggan yahay.
Waxaan la aasaasay sanadkii 2013 la warshad soo saaraha ka badan 1500 oo mitir murabac iyo 200 mitir laba jibbaaran carwada, oo ku yaal Shiinaha taariikhda magaalada Zhongshan. Waxaan badanaa soo saareynaa nalka qurxinta ee kaladuwan, oo ay kujiraan nalka, laambada suunka, nalka, saqafka Siraaj, Siraaj derbiga, Laydhka miiska, Laydhka sagxadda iyo nalka mashruuca u qaabeynta oo leh ikhtiyaarro qalab kala duwan ah, sida birta, aluminium, birta aan lahayn, naxaasta, galaaska, marmar iyo in ka badan oo la heli karo.
Qaabkeena wax soo saarku wuxuu u dhexeeyaa nooca nalalka jikada ee Retro laambadaha gudaha lagu qurxiyo ilaa noocyo kala duwan oo kala duwan iyadoo loo eegayo naqshadeynta moodada naqshadeynta iyo caannimada, sida qaab casri ah iyo mid fudud nalka nalka, nalka madadaalada raaxada leh iyo nalka caadiga ah ee mashruuca sida loo baahan yahay.
Adeegga OEM iyo ODM waxaa la siiyaa oo lagu taageeraa 3 xariiq oo wax soo saar, 1 xariiq tijaabo gabow ah iyo 1 set oo isku dhafan oo tijaabiye ah, 1 gabal baare dheecaan sare leh oo la xiriira mashiinka baaritaanka IP-ga, nalalka oo dhan waa la buuxiyaa ka dib marka la sameeyo kormeer buuxa iyo baaritaanno leh warbixin cad oo QC ah. si loo dammaanad qaado laambad kasta oo tayo sare leh oo deggan.
Iyada oo leh khibrad hodan ah oo ku saabsan laydhka iyo sameynta ganacsi dhoofinta in ka badan 8 sano, alaabada nalka waxaa si weyn loogu isticmaalaa hudheelo kala duwan, waaxyo, guryo la degan yahay, villa iyo meelo dalxiis oo adduunka oo dhan ah waxayna heleen sumcad wanaagsan oo tayo sare leh iyo waqti dheer oo wanaagsan. adeegayaga ee dadaalkeena joogtada ah.
Haus Laydhka, Iftiim adduunka!
Si loo hubiyo kartida qiimaha tartanka iyo nashqadeynta quruxda badan, nalalka Haus waxay haysaa hagaajinta tayada sare, maareynta casriga ah waxayna xiriir wada shaqeyn wanaagsan la leedahay Epistar, Bridgelux, CREE, Osram, Philip, Lifud, Meanwell waxayna bixiyaan tan ugu haboon xalka nalalka si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan.
Iyo waxyaabo badan oo taxane ah oo nalka lagu qurxiyo ee qurxinta ayaa horey u haystay shahaadooyinka CE, dhanka kale, dhamaan qeybaha waxay u hogaansamaan UL, CUL, SAA, Rohs, CB waxayna la xiriiraan qalab caalami ah oo la aqoonsan yahay Waxaan ku dadaalnaa inaan noqono lamaanahaaga ganacsiga nalalka Shiinaha ee lagu kalsoon yahay oo leh nashqad iftiin qurux badan, tayo sare leh iyo qiimo jaban. Tayada iyo qiimaha waxay sii ahaanayaan ahmiyada ugu sareysa ee nalalka Haus!